Safal Khabar - हृदयघातले उमेर भन्दैन, यसरी गर्नुस मुटुको हिफाजत
बुधबार, २५ मङि्सर २०७६ (Wednesday, 11 December, 2019)
बुधबार, २९ साउन २०७६, १९ : ४८
काठमाडौं । स्वस्थ रहने भन्नासाथ हामी शरीरको तौल नियन्त्रण गर्ने र मोटोपना घटाउने कुरा मात्रै गर्छौं । तर, स्वस्थ, जवान र चुस्त रहनको लागि मोटोपना घटाउनुमात्रै पर्याप्त छैन पक्कै पनि । हाम्रो शरीरका भित्री अंगहरुको हिफाजत पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
१. ‘बिहीबार बिदा छैन’
२. नौ वर्षे बालकको डिग्री पढाइ
३. आफ्नै आमाको हत्या गर्ने छोरा पक्राउ
४. दादुरा महामारीको नियन्त्रणमा सघाउन राष्ट्रसंघको आग्रह
५. हात्तीको आक्रमणबाट दुई महिलाको मृत्यु
६. लक्की मिडिया हाउसद्वारा कलाकार तथा व्यवसायीलाई सम्मान
७. ग्रामीण भेगका बिरामीलाई लक्षित गरी स्वास्थ्य शिविर
८. बालुवाटारको जग्गा किन्नेविरुद्ध मुद्दा चलाउने तयारी
९. भगवतीमाई गाउँपालिकामा युवा स्थापित डोजर विस्थापित नीति लागू